Akụkọ - Nyocha CPC na ụlọ ọrụ anyị
Uzo ntinye nke coke nwere okpukpu di na China bu ulo oru electrolytic, na-acho ihe kariri 65% nke onu ogugu ndi ozo, na-esote carbon, silicon ulo oru na ulo oru ndi ozo. Ojiji nke calke nwere coke dika mmanu karisia na simenti, ike ike, iko na ulo oru ndi ozo, na acho obere onu.
Ka ọ dị ugbu a, nnweta ụlọ na agụụ nke coke calcined bụ otu. Agbanyeghị, n'ihi mbupụ nke oke mmanụ ala-sọlfọ dị elu, ngụkọta ụlọ nke calcined coke ezughi oke, ọ ka dịkwa mkpa ibubata coke na sọlfọ sulphọn na coke na-eme ka mgbakwunye.
Site na owuwu nke onu ogugu coking n'ime afo ndi a, a ga-agbasawanye mmepụta nke cocin calcined na China.
Dabere na sọlfọ ahụ, enwere ike kewaa ya na sọlfọ sọlfọ dị elu (sọlfọ sel elu karịa 3%) na sọlfọ sulphur dị ala (ọdịnaya sọlfọ dị n'okpuru 3%).
Enwere ike iji cour sọlfọ dị ala dịka anodic tapawa na preoded anode maka osisi aluminom na kọlụm graphite maka osisi nchara.
The elu àgwà ala sọlfọ coke (sọlfọ ọdịnaya na-erughị 0,5%) nwere ike iji na-emepụta graphite electrode na carbonizing gị n'ụlọnga.
A na-ejikarị sọlfọ sọlfọ nke ogo zuru oke (sọlfọ na-erughị 1.5%) mee ihe na mmepụta nke anode.
A na-ejikarị coke dị ala eme ihe na-agbaze silicone na mmepụta anodic.
A na-ejikarị sọlfọ sulphur mee ihe dị ka mmanụ ọkụ na osisi ciment na osisi ike.
Na-aga n'ihu na kpọmkwem nlele na ule bụ akụkụ dị mkpa nke usoro mmepụta anyị.
Cour sọlfọ siri ike nwere ike ime ka ikuku gas na-eme ihe ngosi mgbe niile, na-ebute mgbawa na ngwaahịa carbon.
Nnukwu ọdịnaya ash ga-egbochi crystallization nke ihe owuwu ahụ ma metụta arụmọrụ nke ngwaahịa carbon
A ga-anwale usoro ọ bụla nke ọma, anyị chọrọ ime bụ kpọmkwem data nchọpụta.
Dị ka akụkụ nke usoro mma anyị, a ga-atụle ngwugwu ọ bụla ma ọ dịkarịa ala ugboro 3, iji zere esemokwu ọ bụla.
Na-enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ calcined coke resistivity dị oke elu, nso insulator ahụ, mgbe ịmechara calcining, nguzogide siri ike daa, ọ dabara adaba na mgbochi nke coke mmanụ na calcined okpomọkụ, mgbe 1300 ℃ nke calcined mmanụ coke na-eguzogide ruo 500 μm Ω m. ma ọ bụ otú.